Baarlamaanka oo maanta u codeynaya isbedel lagu sameynayo xilliga doorashada guud – The Voice of Northeastern Kenya
Baarlamaanka oo maanta u codeynaya isbedel lagu sameynayo xilliga doorashada guud
Golaha qaran ee sharci dejinta ayaa galinka dambe ee maanta lagu wadaa inuu u codeeyo isbedel uu soo jeediyay xildhibaanka laga soo doortay degaanka Kiminini Chris Wamalwa kaasi oo ku aaddan xiliga la qabto doorashada guud.
Mr. Wamalwa ayaa doonaya in la bedelo taarikhda codeynta oo hadda ah talaadada labaad ee bisha sideedaad lagana dhigo isniinta saddexaad ee bisha Disembar.
Si arrintan ay u meel marto waxaa loo baahanyahay inay codkooda ku tageraan saddex meelood laba meel tirada xildhibaanada oo u dhiganta 233.
Guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dastuurka iyo cadaaladda ayaa taageeray soo jeedinta Wamalwa.
Chris Wamalwa ayaa raja wanaagsan ka muujiyay inuu ku guuleysan doono isbedelka uu doonayo in la sameeyo maadaama sida uu hadalka u dhigay uu xildhibaano badan ka dhaadhiciyay tageerana uu ka heli doono.
Mudanaha waqooyiga ismaamulka Baringo ahna guddoomiyaha guddigan Mr. William Cheptumo ayaa sheegay inay khasab tahay in dadweynaha loo bandhigo arrinkan si ay afkaartooda ugu biiriyaan.
Dhanka kale xildhibaanka Homa Bay Peter Kaluma ayaa soo jeediyay in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC si tirada sarakiisha sar sare loogu soo reebo 5.
← Dhimashada ka dhalatay dhul go’o saameeyay Ugandha oo gaartay 43
Madaxweynaha oo amray in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada →